ओलीपक्षका नेताहरुलाई एकएकगरी भेटे प्रचण्डले, सुवास नेम्वाङसँग के भयो कुराकानी ? - Nepal Daily
ओलीपक्षका नेताहरुलाई एकएकगरी भेटे प्रचण्डले, सुवास नेम्वाङसँग के भयो कुराकानी ?
शुक्रबार, ०५ मंसिर २०७७, १४ : ५४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग एक्लै बालुवाटारमा नभेट्ने सन्देश पठाएर उनीनिकट नेताहरुलाई एकएकगरी भेटेका छन् ।
ओलीनिकट नेतासँग आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा प्रचण्डले एकएकगरी छलफल गरेका हुन् । शुक्रबार मध्यान्ह १२ः१५ देखि अध्यक्ष प्रचण्डसँग ओलीनिकट सचिवालय सदस्य एव‌ं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल छलफलमा जुटेका थिए। त्यसपछि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सँग पनि प्रचण्डले भेटवार्ता गरेका छन् ।
नेम्वाङसँगको भेटमा पनि प्रचण्डले ओलीले चाल्ने गलत कदममा साथ नदिन प्रचण्डले चेतावानी दिएको स्रोतको दाबी छ । ओलीले पार्टी विभाजनलाई सहयोग पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याउन सक्ने र संसद भंग गरेर नयाँ जनादेश लिने तयारी गर्नसक्ने भन्दै यस्ता कदममा साथ नदिन प्रचण्डले सचेत गराएका थिए ।